अन्नपूर्ण पोस्टमा हुँदै नभएको गृह मन्त्रालयको आकस्मिक बैठकको समाचार – MySansar
अन्नपूर्ण पोस्टमा आज अचम्मै भयो। पत्रिकाको पहिलो पेजमै एउटा एक कोलमको समाचार छापियो जसको शीर्षक थियो- गृहमा आकस्मिक बैठक। त्यही समाचार अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाइनमा मात्र छापिएन, भुरे टाकुरे कपिपेस्टे अनलाइनहरुले पनि भटाभट कपिपेस्ट गर्न थाले।
समाचार ठूलो थिएन। मात्र तीन वाक्यको थियो। तर गम्भीर थियो। गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बैठक डाकेर सतर्क रहनु भनेको गम्भीरै कुरा हो नि। तर यस्तो गम्भीर खबर भने फेक परेछ। अर्थात् गलत समाचार। गृहमन्त्रीले बैठक डाकेकै थिएनन्। बैठक बसेकै थिएन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त विगत तीन दिनदेखि काठमाडौँमै थिएनन्।
यस्तो थियो अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको समाचार-
नजिकबाट हेरौँ समाचार-
गृहमन्त्री अस्तिदेखि नै चितवनमा थिए। अनि काठमाडौँमा कसरी सुरक्षा प्रमुखहरुसहितको बैठक भएछ? अचम्म !
यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाइनमा पनि छापिएको थियो यो लिङ्कमा
तर अहिले त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्कै समाचार पो खुल्छ-
समाचारको मुनितिर एउटा यस्तो सानो नोट राखिएको छ सम्पादकको नाममा
अनलाइनको यो एकदम गलत अभ्यास हो। एउटा समाचार छापिएको लिङ्कमा त्यो समाचार पूरै डिलिट गरेर अर्कै समाचार प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीतको कुरा हो। अझ ‘यसअघि यो लिंकमा गलत समाचार प्रकाशित भएकोमा क्षमाप्रार्थी छौँ’ भनेर लेखिए पनि पहिले के समाचार थियो र त्यसका के गल्ती थियो भन्ने बारे कुनै जानकारी दिइएको छैन। त्यसो गर्नु पाठकलाई ठग्नु हो। पाठकलाई के गलत छापिएको थियो भन्ने जानकारी पाउने अधिकार हुन्छ।
अनलाइनमा त यो समाचार सच्याइयो, अनलाइन नहेर्ने पत्रिकामात्र पढ्नेहरुले त यो सही समाचार नै ठानिरहेका होलान्। ती पाठकहरु समक्ष भोलि अन्नपूर्ण पोस्टले कसरी माफी माग्ने हो, भोलिको अङ्क हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अनलाइनमा त लाज मानी मानी के सच्याएको थाहा पनि नहुने गरी समाचार त सच्याइयो, तर कपिपेस्ट गरी यसरी समाचार आएका अनलाइनहरुलाई कसले सम्झाउने? यति धेरैमा भ्रम फैलाएकोमा जिम्मेवार को ?